I-Kwid ithengwa ngenani elingcono
INTATHELI YEZEZIMOTO | July 26, 2019
ABANTU abaningi bafuna ukuphuma ezimotweni ezithutha umphakathi bese bethenga lezo ezisesigabeni esibizwa nge-entry level.
Ezinye zezimoto ezikulezi zigaba ezithengwa kakhulu yiRenault Kwid neDatsun Go. Zombili zishibhili kodwa uma sekuyisikhathi sokudayisa yiyiphi othola imali engcono ngayo?
UDarryl Jacobson, ongumphathi weTrue Price, uthe impendulo yiRenault Kwid. Uthe yehlula iDatsun ngesikhala esikhulu.
“Lokhu yinto ebaluleke kakhulu okumele uyibheke ngaphambi kokusayina. Kungenza umehluko omkhulu wemali uma sekufika isikhathi sokudayisa. Umuntu kumele ayibheke ukuthi imoto yehlelwa yintengo engakanani uma ethenga,” kusho uJacobson.
Yena nethimba lakhe bahambela izithangami ezahlukene lapho kudayiswa khona esidlangalaleni izimoto ezidliwe ngamabhange. Uthe ulwazi abaluqoqayo lungasiza ukuthola ukuthi imoto ingayisa ngamalini.
“Ngokusebenzisa ulwazi esiluthola ezinkundleni zokudayisa esidlangalaleni izimoto ezidliwe ngamabhange siyakwazi ukuthola intengo ongadayisa ngayo imoto. Ivezwa ngephesenti lemali ebiza yona iseyintsha,” kusho yena.
Uthe iKwid iziwinele ingcaca ngoba uthola u-76.27% wentengo yayo uma uyidayisa. NgeGo uthola u-68.24%.
IKwid ithengwa kangcono futhi kuneGo.
“NgoMeyi kudayiswe angu-634 kwathi ngoJuni kwadayisa angu-1 056 uma kuqhathaniswa neGo okudayise angu-409 ngoMeyi nangu-723 ngoJuni,” kusho uJacobson.
UJacobson uthe abathengi abasha bancamela iKwid. Uthe lokhu kungenxa yokuthi ibukeka kahle.
“Yinhle ngempela. Abantu bayayithanda, nami futhi.”
Uthe iGo ngakolunye uhlangothi ayiyinhle. Uthe iyimoto ekahle ikakhulu ngenxa ithuthukiswe ezokuphepha.
“Ngaphezu kwalokhu iqokwe njengemoto okushibhile ukuyisevisa nokuyilungisa emunxeni weCity Cars ne-Entry Level embikweni we-AA Kinsey Report. Kodwa ayihehi kubathengi abasebancane njengeKwid. Yize abathengi abaningi esidlangalaleni bengabeminyaka ehlukene, kujwayele ukuba nesasasa uma kufika iKwid idayisa,” kusho uJacobson.
Uthe yize kunjalo u-68.24% awumubi ngoba yehlula izimoto eziningi kodwa ayincintisani neKwid.
Utholwe esibhedlela obekucatshangwa ukuthi wafa
Kuyimpilo ukuzithokozisa ngocansi
Kuqalile ukuqulwa kwelikaPhuzekhemisi
UJudas ufisa kunqobe iChiefs
Bahlalele ovalweni abashayeli be-Uber